OSB ထံမှ Volkswagen ကBağyurduဖိတ်ကြားချက်ကိုဆိုက်ရောက်! - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ45 ManisaOSB ထံမှ Volkswagen ကBağyurduဖိတ်ကြားချက်ကိုဆိုက်ရောက်!
12 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 45 Manisa, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
Volkswagen Bağyurduဖိတ်ကြားချက်ကို OSB မှလာသည်အထိ
1.3 အတွက် Manisa ၏ဘီလီယံယူရိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ရွေးချယ်ရာတွင် Volkswagen ရဲ့ကမ္ဘာ့, ထို့နောက်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးစက်ရုံထုတ်ကုန်များ၏ပေးသွင်းဖို့ဒီဖိတ်ကြားချက်ကိုထောက်ခံမှုပေးဒေသတွင်းဘေးမှာတည်ရှိပါတယ်တူရကီBağyurdu OSB ထံမှလာ၏။
ဒီဖိတ်ကြားချက်ကိုထုတ်ကုန်ထောက်ခံမှုပေးဖို့ပေးသွင်း၏အိမ်တံခါး၏ရွေးချယ်ရေးပြီးနောက်တည်ရှိသော Manisa, တူရကီBağyurduအတွက် Volkswagen ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများအတွက် 1.3 ဘီလီယံယူရိုအဆိုပါ OSB စက်ရုံထဲကနေလာ၏။
Bağyurduဤပြဿနာကိုဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံ (BAYOSB) ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Aydin Telser, Manisa ၏ရွေးချယ်ရေးအတွက် Volkswagen ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံမှဂျာမန်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးအပေါ်မှတ်ချက်တွေ, သူသည်ဤတိုင်းပြည်နှင့်ဒေသတွင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ကြီးမားတဲ့အနိုင်ရရှိကြောင်းပြောခဲ့သည်။
မျှော်မှန်းစက်ရုံ၏လူမှုရေးဒေသများအကြောင်းကို5တထောင်လူများ, အိုးအိမ်, ထိုကဲ့သို့သောအဆောက်အအုံများအဖြစ်တောင်းဆိုနေပြီနှင့်ဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း, ပစ္စည်းအတွက်ဂျာမန်ဘီလူးကြီး, ပစ္စည်းနှင့်ထုတ်ကုန်ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်သူကိုပေးသွင်းများအတွက်ရှာပုံတော်အတွက်ကောင်းစွာစတင်သိခဲ့ရတယ်ကြောင်းပညာရေးအလုပ်အကိုင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.3 ဘီလီယံယူရိုကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ကိုယ်နှိုက်များအတွက်အမြတ် ", ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်း Telser ဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့ဖြတ်သန်းနေကြသည်ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာအတွက်ပူပန်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုထိုကဲ့သို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသနှင့် Manisa များအတွက်ကြီးမားသောအနိုင်ရရှိကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်။ အလွန်ကြီးစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးလိမ့်မည်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူတထောင်ကလူ5မှအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးအပ်နေစဉ်အမှုအရာတို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဤအထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများနှင့်ပေးသွင်းဖို့ပစ္စည်းထောက်ခံမှုပေးသွားမှာပါ။ Manisa အတွက်Bağyurdu OSB လာသေး၏မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းဖို့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ချထားမည်ဖြစ်ကြောင်းပေးသွင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများရဲ့အစမှာတည်လိမ့်မည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအားသာချက်များ, အရည်အသွေးနှင့်မပြတ်မတောက်စွမ်းအင်, ခေတ်မီအခြေခံအဆောက်အအုံန်ဆောင်မှု, ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်တည်နေရာအရှိဆုံးအဆင်ပြေအတွက်မက်လုံးနှင့်အတူအလယ်အလတ်ဒြပ်စင်, BAYOSB လေ့ကျင့်သင်ကြားပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
Izmir အစ္စတန်ဘူလ်ကားလမ်း 500 မီတာလေဆိပ် 57 ကီလိုမီတာ, İzmir-တူရကီမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုသူတို့ Telser အတွင်း၎င်းတို့၏အများအပြားအားသာချက်များအတွက်ကိုင်သောနိုင်ငံတော်သမ္မတ BAYOSB နှင့်အတူ Manisa အိမ်နီးချင်းတည်နေရာ, "အလုပျအကိုငျလေ့ကျင့်ရေးစင်တာနှင့်အတူထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံဘေးတွင်ဖွင့်ကွက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်အနိမ့်ပြီးစီး ဖွဲ့စည်းပုံ, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သင့်လျော်သောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူစုစည်းမှုနှင့် BAYOSB စက်, Volkswagen ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် OSB ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်များကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးတော်ပါတယ်ပေးသွင်း။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲစက်မှုလုပ်ငန်းမျှော်လင့်ထား။ အဘယ်သူမျှမလျှောက်ထားသူတစ်ဦးကအလွန်တိုတောင်းသောအချိန်အတွက်စက်ရုံတည်ဆောက်ရန်စတင်နိုင်လျှင်, "ဟုသူကကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
အလင်းရထားစနစ်စီမံကိန်းများအတွက်ပံ့ပိုးမှုကနေ Manisa OSB 02 / 10 / 2013 Manisa OSB များအတွက်အလင်းရထားစနစ်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ Manisa မြို့တော်ဝန် Cengiz Ergun, ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ Saitama Türekဥက္ကဋ္ဌ OSB ရုံးကိုလက်ခံခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ငံတော်သမ္မတ Ergun စဉ်အတွင်း ASD ကိစ္စများ၏ချဲ့ထွင်မှုနှင့် တွဲဖက်. အတွက်အလင်းရထားလမ်းစနစ်ကဆွေးနွေးတင်ပြရာveçalışမကြာသေးမီကဆောင်ခဲ့လေ၏။ Türek; ကျွန်တော်တို့သည်စီမံကိန်း OSB နိုင်ငံတော်သမ္မတTürekပံ့ပိုးသူတို့ Manisa မြူနီစီပယ်ရဲ့စီမံကိန်းကိုသူတို့ Sait Türek Manisa မြို့တော်ဝန် Cengiz Ergun သူ့ရုံးခန်းထဲမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုဥက္ကဋ္ဌsöyledi.osbယူခြေလှမ်းများမှာကျေနပ်ခဲ့ကြသည် OSB တိုးချဲ့အမှတ် support ကဆိုသည်။ Türek, ကိုယ်ပိုင်ရေနံ Alfafa ဟာစက်ရုံခရီးစဉ်၏နိုင်ငံတော်သမ္မတ Ergun ထုတ်ကုန်အသစ်တွေထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ရသောသံလွင်ဆီ။ အဆိုပါTürekသွားရောက်ကြည့်ရှု ...
Eskişehir OSB ကနေအမေရိကန် Greenbrier ကုမ္ပဏီများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ကြားလွှာ 21 / 09 / 2017 မကြာသေးမီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတော်များများ၌တွေ့ရှားပါးလုပ်ခ၏Eskişehir OSB ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖိတ်ကြားချက်ကို၏စာတစ်စောင်ကိုစလှေတျEskişehir Greenbrier CEO ဖြစ်သူဘီလ် Furman ကုမ္ပဏီထံသို့ လာ. ၏ကုမ္ပဏီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရတယ်။ ပြည်နယ်အတွင်းရှိပြွတ်ရထားစနစ်နှင့်အတူ Eskisehir အတွက် Anadolu တက္ကသိုလ်, "အမျိုးသားရထားစနစ်များသုတေသနနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းရေးစင်တာ" (URAYS ငါ) သို့သွားရောက်အဖြစ်အခြားအဓိကထုတ်လုပ်သူများနှင့် sub-ကန်ထရိုက်တာများကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်ဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုပေါ်မှ Greenbrier ကုမ္ပဏီ CEO ဖြစ်သူဘီလ် Furman အကြောင်းကိုအကြောင်းကြားထားပါသည် တစ်ဦးဖိတ်ကြားချက်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတEskişehir OSB ရှားပါးအိုးထဲကနေလာ၏။ Eskişehir OSB, ရှားပါးနားတောင်းသမ္မတကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီ CEO ဖြစ်သူဘီလ် Furman, "ကစေလွှတ် Greenbrier ဖိတ်ကြားချက်ကိုအက္ခရာ ...
တူရကီအတွက်စက်ရုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Make မှဂျာမန်ကားကိုဧရာမ Volkswagen က 11 / 12 / 2018 ဂျာမန်ကားထုတ်လုပ်သူ Volkswagen က (VW တို့), တူရကီအတွက်အလုပ်နှစ်ပတ်လည်5တထောင်ကလူများကိုတစ်ဦးစက်ရုံထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ဂျာမနီမှာလျှပ်စစ် VW တို့ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များများအတွက်အာကာသဖြစ်စေခြင်းငှါရှာပုံတော်တစ်ဦးအနေဖြင့်သူသည်စက်ရုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်တူရကီအကြားရွေးချယ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သတင်းအတွက် AutomobilWoche အတွက်ဂျာမန်ကားကိုဂျာနယ်, ထိုတူရကီရဲ့ထိရောက်သောတိုင်းပြည်မရွေးပြည်နယ်များအတွက်ကားတစ်စီးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု။ အဆိုပါ 2022 ရဲ့တူရကီစက်ရုံအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ် VW တို့, Skoda နှင့်ထိုင်ခုံမော်ဒယ်များကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌ on-site ကိုအုပ်စုတစ်စု၏ထုတ်လုပ်မှုဆောင်ရွက်ရန်လိမ့်မယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 နှစ်ပေါင်း Volkswagen ကတူရကီ (VW တို့) ထက်ပိုဂျာမန်ကားကိုဧရာမရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖျောင်းဖျခံရဖို့ဆည်းကပ် ...
Konya Da Talib အတွက် Volkswagen ကစက်ရုံဖြစ်သွား 01 / 07 / 2019 စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Konya ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (KTO) ကသမ္မတ Selcuk Ozturk, "ကျွန်တော်တို့ဟာတူရကီအတွက် Konya မှထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအစီအစဉ်များကိုတပ်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ဂျာမန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီကြီး Wolkswagen စတင်," ဟု၎င်းကပြောသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 နှစ်ပေါင်း Volkswagen က (VW တို့) ကိုအပြီးသတ်ခဲ့ဂျာမန်ကားကိုဧရာမရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်တူရကီစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ Kesinleşirk Volkswagen ကပြည်နယ်များအကြားတူရကီနီးပါးရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြလိမ့်မည်ကမ္ဘာတွင်မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီကြီးမြို့ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတပ်ဆင်ရန်အပြေးပြိုင်ပွဲစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ Volkswagen ရဲ့ Skoda မှစတင်ခဲ့ပြီးတူရကီအတွက်သတင်းထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ထိုင်ခုံ2Konya ရဖို့ကြိုးစားရန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Konya ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံပြောင်းရွှေ့ဘီလီယံယူရိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပါလိမ့်မယ်။ VW တို့ရဲ့ CEO ဖြစ်သူဟားဘတ် Diessen ...
အဆိုပါ ECA ၏ZONSİADနိုင်ငံတော်သမ္မတ: 'ကိုသင်ပါသလားသင့်သ Volkswagen က Zonguldak ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု' ' 04 / 07 / 2019 ဂျာမနီ Volkswagen ကတူရကီအခြေစိုက်ကားကုမ္ပဏီ၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတစ်ခုမှာသစ်ကိုစက်ရုံအတွက်ရွေးချယ်ထားပြီးပေမယ့်သေးသတင်းစာသတင်းအချက်အလက်ထဲမှာပါဝင်အပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်းမထားပါဘူး Zonguldak စက်မှုလုပ်ငန်း '' နှင့်စီးပွားရေးသမားများရဲ့အသင်း (ZONSİAD) ဥက္ကဋ္ဌ Khalil အီဘရာဟင် ECA အတွက်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မပေးနိုငျသညျ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို၏အားသာချက်, Zonguldak ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Volkswagen ကအော်တိုတူရကီအတွက်စက်ရုံနှင့် destekliyoruz.de အပေါငျးတို့သအဖွဲ့ဝင်များ, ECA တူရကီ, မြို့မော်တော်ကားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် Zonguldak ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို၏အားသာချက်ရှိကြောင်းကိုအလေးပေးသော, တစ်ဦးကကြေညာချက်တွင်ပြောကြားထားသည်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်မော်တော်ကားကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Zonguldak Zonguldak ပြည်နယ်, လမ်း၏ပထမသမ္မတနိုင်ငံ, ရထားလမ်း, ပင်လယ်နှင့်ဒေသတွင်း၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ကွန်ရက် ...
တူရကီန်ကြီးချုပ်သစ်ရွေးချယ်နယူးစက်ရုံမှ Volkswagen က 13 / 07 / 2019 အသစ်ကစက်ရုံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဂျာမန်ကားထုတ်လုပ်သူ Volkswagen AG ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တူရကီကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဂျာမန်အော်တိုကုမ္ပဏီကြီး Volkswagen က AG က, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ကမ္ဘာ့ဖလားအသစ်တစ်ခုစက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်နေပြီနှင့်စက်ရုံအဘို့ဤအလယ်အလတ်တည်နေရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အကြောင်းကို5တထောင်ကလူအလုပ်သောအားဖြင့်တံခါးကိုဖွစျလိမျ့မညျသောအသစ်သောစက်ရုံ၏တည်နေရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့အဆုံးမှာက၎င်း၏အသစ်ကစက်ရုံကိုပေး၏။ အဆိုပါ Audi အတွင်းမှာပဲ Skoda နဲ့ Volkswagen ထိုင်ခုံရှိသည်, သစ်ကိုစက်ရုံ Izmir အနီးတွင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ Bulgarsit နှင့်သူ Volkswagen'n စက်ရုံအကြားရွေးချယ်ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ် Izmir တူရကီန်းကျင် built ပါလိမ့်မည်သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ...
Fethi Altunyuv Elazig OSB ရထားလမ်းလင့်များနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံအကွောငျးပွော 09 / 01 / 2012 ဥဖရတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (AFD) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Fethi Altunyuv ဒေသတွင်းအဖြစ်ပြည်နယ်များ၏အလုပ်အကိုင်မှတ်တိုင်, သူတို့ကသွယ်ဝိုက်အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ Altunyuv အောက်ပါပြောပါတယ်: "ခရီးသွားလာရေး 2011 တစ်နှစ်တာနှင့်စက်မှုအခြေခံအဆောက်အဦဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ္ဍာရေးပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ် Elazig OSB ရထားလမ်းလင့်များနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံထောက်ခံပါလိမ့်မည်နှင့်ဆက်စပ်သောပရောဂျက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့: IPA စီမံကိန်းကိုအဆိုပြုချက်ကိုအချို့ကိုအခြားအေဂျင်စီများနှင့် တွဲဖက်. ဤသည်သိပ္ပံစီမံကိန်းကိုကျနော်တို့စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနပူဇော်ကြ၏။ source: သတင်း Pro ကို
Metro ရဲ့ Gebze OSB သငျသညျတိုငျအောငျuzatılıl 12 / 09 / 2012 သူကဝန်ကြီးချုပ် Gebze OSB နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်သည်အထိမြို့တော်မြို့တော်ဝန်အာဗြဟံသည်Karaosmanoğlu, အစ္စတန်ဘူလ် Kadikoy-Kartal မက်ထရိုအတွက် extension ကိုများအတွက်လုပ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ကြသောဒေသတွင်း၌ Ksour ကဆိုသည်။ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Kocaeli ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (KSO) ဒေသဆိုင်ရာအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးခန်းမများ၏အခန်းကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေး; မြို့တော်ဝန် Ibrahim Karaosmanoğlu, သိပ္ပံဌာနခေါင်းကို Mustafa Altai, ဒေသများနှင့်မြို့ပြရေးရာဦးစီးဌာနဦးခေါင်းGökmenMengüç IZAYDAS မှ General Manager မိုဟာမက် Saddler အလုပ်လုပ်တယ်, အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးပုံနှိပ်ခြင်းရှိမရှိ, Kocaeli လှုပ်ရှားမှုများထဲမှာသွားလာသောစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ မြို့တော်အရာရှိများ, စက်မှုလုပ်ငန်းပြဿနာတွေနဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုနားထောင်တယ်။ ရထားလမ်းကွန်ယက် TERMS Ayhan Zeytinoğluသမ္မတ Anatolia မှယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်စက်မှုပြန့်ပွားဘို့အစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်းမှာပြောသော ...
အပြေးသမားလာမယ့်အတူ OSB မှမီးရထားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း | Bursa 07 / 01 / 2013 OSB မှမီးရထားရထားလမ်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Binali Yildirim နှင့်တကွကြွလာသူသည်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား link ကို၏သဲအခမ်းအနားမှာ Gemlik ကုန်တင်ရထားကြေညာခဲ့သည်။ ယခုဤခေါင်းစဉ်နောက်ထပ်ရှေ့ဆက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုတစ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာဖန်တီးရှိရာဒေသသို့မြို့တံခါးဝ၌နိုင်ငံတော်မီးရထားမြန်နှုန်းရထားဘူတာရုံ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု။ ထိုအ3အဓိကအား Bursa အတွက်ရထားလမ်းကွန်ယက်၏ကြီးမားသောစက်မှုဧရိယာမှစွပ်စွဲနေပါတယ်။ DOSAB စက်မှုလုပ်ငန်းလာမယ့်ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံ, NOSAB နှင့်သံလမ်း။ အဆိုပါဆိပ်ကမ်းအတွက်ဖြည့်ဆည်းဖို့, ဒေသတွင်း၌ထုတ်လုပ်သုံးကြီးမားသူတွေနဲ့အတူထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုန်တင်ရထား၏အရေးပါမှုကိုအရာအတွက်ဧရိယာမှပြောင်းရွှေ့ဖို့ရည်ရွယ်။ မနေ့က, အ AK ပါတီပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Sadat Yalçın'lသူတို့ကိုပြောနေတာရန်, အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ...
အပြေးသမားလာမယ့်အတူ OSB မှမီးရထားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း 09 / 01 / 2013 ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Binali Yildirim high-speed ကိုရထား link ကို၏သဲအခမ်းအနားမှာ Gemlik ကုန်တင်ရထားကြေညာခဲ့သည်: OSB မှမီးရထားရထားလမ်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်တကွကြွလာ။ ယခုဤခေါင်းစဉ်နောက်ထပ်ရှေ့ဆက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုတစ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာဖန်တီးရှိရာဒေသသို့မြို့တံခါးဝ၌နိုင်ငံတော်မီးရထားမြန်နှုန်းရထားဘူတာရုံ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု။ ထိုအ3အဓိကအား Bursa အတွက်ရထားလမ်းကွန်ယက်၏ကြီးမားသောစက်မှုဧရိယာမှစွပ်စွဲနေပါတယ်။ DOSAB စက်မှုလုပ်ငန်းလာမယ့်ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံ, NOSAB နှင့်သံလမ်း။ အဆိုပါဆိပ်ကမ်းအတွက်ဖြည့်ဆည်းဖို့, ဒေသတွင်း၌ထုတ်လုပ်သုံးကြီးမားသူတွေနဲ့အတူထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုန်တင်ရထား၏အရေးပါမှုကိုအရာအတွက်ဧရိယာမှပြောင်းရွှေ့ဖို့ရည်ရွယ်။ မနေ့က, အ AK ပါတီပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Sadat Yalçın'lသူတို့ကိုပြောနေတာမှသူကအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ " ... ဟာ OSB
Manisa OSB Bağyurdu
အလင်းရထားစနစ်စီမံကိန်းများအတွက်ပံ့ပိုးမှုကနေ Manisa OSB
Eskişehir OSB ကနေအမေရိကန် Greenbrier ကုမ္ပဏီများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ကြားလွှာ
တူရကီအတွက်စက်ရုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Make မှဂျာမန်ကားကိုဧရာမ Volkswagen က
Konya Da Talib အတွက် Volkswagen ကစက်ရုံဖြစ်သွား
အဆိုပါ ECA ၏ZONSİADနိုင်ငံတော်သမ္မတ: 'ကိုသင်ပါသလားသင့်သ Volkswagen က Zonguldak ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု' '
Fethi Altunyuv Elazig OSB ရထားလမ်းလင့်များနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံအကွောငျးပွော
Metro ရဲ့ Gebze OSB သငျသညျတိုငျအောငျuzatılıl
အပြေးသမားလာမယ့်အတူ OSB မှမီးရထားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း | Bursa
အပြေးသမားလာမယ့်အတူ OSB မှမီးရထားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း